विश्वकप फुटबल दोश्रो सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्ड कि क्रोएसिया भिडदै, को जाला फ्रान्स संग फाईनल भिड्न ! || सुनौलो नेपाल
विश्वकप फुटबल दोश्रो सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्ड कि क्रोएसिया भिडदै, को जाला फ्रान्स संग फाईनल भिड्न !
विश्वकप फुटबलको फाइनल पुग्ने दोस्रो टोलीको टुंगो आज लाग्नेछ । बेल्जियमलाई १–० ले हराउँदै फ्रान्स फाइनल पुगिसकेको छ । फाइनल प्रवेशका लागि आज इङ्ल्यान्ड र क्रोएसियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । खेल नेपाली समय अनुसार राती ११ः४५ बजे सुरु हुनेछ ।
दुवै टोली लामो समयपछि सेमिफाइनल पुगेका हुन् । क्रोएसिया २० वर्षपछि र इङ्ल्यान्ड २८ वर्षपछि अन्तिम चारमा पुग्न सफल भएको हो । इङ्ल्यान्डले सन् १९९० र क्रोएसियाले १९९८ को सेमिफाइनल खेलको थिए ।
अहिले सम्म फाइनल पुग्न नसकेको क्रोएसिया १९९८ मा आयोजक फ्रान्ससँग सेमिफाइनलमा पराजित भएको थियो । इङ्ल्यान्ड विश्व कप इतिहासमा एकपटक मात्र १९६६ फाइनल पुगेको थियो र टोली त्यहि बेला च्याम्पियन बनेको थियो ।
विश्वकपको सुरुवातीमा यी दुवै टोली यहाँ सम्म पुग्लान् भन्ने धेरेको अनुमान थिएन । समूह चरणबाट सहज रुपमा अघि बढेपनि क्रोएसियाले नकआउट चरणमामा डेनमार्क र आयोजक रसियालाई क्वार्टरफाइनलमा पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेर हराएको थियो ।
अर्को तिर समूह चरणबाट त्यस्तै सहजै अघि बढेको इङ्ल्यान्डले अन्तिम १६ मा कोलम्बियालाई पेनाल्टी सुट आउट र क्वार्टरफाइनलमा स्विडेनलाई २–० ले हराएको थियो ।
बुध, असार २७, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस